Ụbọchị My Pet » 7 Dị Mfe Ụzọ Mee Ya Fall na Ịhụnanya
7 Dị Mfe Ụzọ Mee Ya Fall na Ịhụnanya
emelitere ikpeazụ: Ka. 30 2020 | 2 min agụ
Ya mere, ị daworo isi-ihe karịrị-ikiri ụkwụ ka a nwoke, ugbu a ihe? The n'okpuru mfe nzọụkwụ ga-enyere-ajụ ya ọbụna miri karịa gị.
mfe Nzọụkwụ #1: mgbe niile Smile
-Egbu maramara a ịmụmụ ezi ọnụ ọchị mgbe o kwere omume na-eme ka ị na-ele mmadụ mfe ịbịakwute. Ma nke a na inwe-emeri ọnụ ọchị gị na iji na gị Ihọd ma ọ bụ a oge na oge, amụmụ ọnụ ọchị ga-enye aka ime ka ị obi ụtọ ka nke n'aka nke ga-eme ka gị na Ihọd na-achọ iwepụtakwu oge na unu.
NDỤMỌDỤ: Mgbe na-eme anya na kọntaktị na ịhụnanya gị, ji nwayọọ nwayọọ na ọnụ ọchị ikwe ka ọ na-agbasa nile ihu gị. Ozugbo ọ na-ahụkwa, n'echebaraghị ya echiche anya ala. Nke a ga-eme ka ị irresistible.
mfe Nzọụkwụ #2: -Egosi na Best Ị
Na-agbanwe agbanwe n'ihi na onye ọ bụla, ka naanị na mmadụ bụ a uzommeputa n'ihi ọdachi. Anyị niile nwere ịtụnanya àgwà otú gịnị mere na-egosi ndị? Ọ bụghị nanị na nke a ga-anya isi gị obi ike kama ọ ga-eme ka ị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ gị nwoke.
NDỤMỌDỤ: Nanị na-etinye mgbalị anya ọma. Nọgidenụ na-na ntutu isi ọcha na imezi, -ahụ a mbinye aka senti, mgbe niile nwere ọhụrụ ume, wear lipstick, -eme ka n'aka gị wodrobu dị ọcha na ahaziri.
mfe Nzọụkwụ #3: -abụ Omimi
Iji egosi omimi na irresistible, ị chọrọ ahapụ gị nwoke na-eche banyere gị.
NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ọ na-ajụ banyere gị akụkọ, naanị gwa ya ole na ole nkọwa mgbe ahụ ọchị ma na-ekwu “ndị fọdụrụ M ga-azọpụta n'ihi na oge ọzọ”. Ọzọkwa, echere ka o kpọtụrụ gị. Mgbe o mere ihe, chọpụta adịghị emeghachi omume ozugbo. Ọ bụghị nanị na a ga-eche banyere gị dum oge, ma ọ ga-abụ ụtọ na i nwere ihe ndị ọzọ na-eme ka dote on ya ụbọchị nile.
mfe Nzọụkwụ #4: Always ahapụ ya, ọ chọrọ ịna More
-Ahapụ gị nwoke chọrọ ọzọ bụ mgbe a ezi echiche. Ọ bụrụ na ị mechie mkparịta ụka ahụ tupu nsogbu ya aka stale na-agwụ ike, ọ ga-ozugbo na-atụ anya oge ọzọ ị na abụọ okwu.
NDỤMỌDỤ: Ma ọ bụ texting, emailing, ma ọ bụ a ihu na ihu kwụsị mkparịta ụka tupu du emee. Ọzọkwa, eme ka hụ na ọ bụghị obsessively kpọtụrụ ya. Ọ bụrụ na ị na-eme na onwe gị dị, ị ga-egosi onwe ikwaghari.
mfe Nzọụkwụ #5: subtly achụ nwoke
idobe aghụghọ, ILE mma ga-enyere onye ahụ aka inweta obi ike na mmekọrịta na ị abụọ na-emepe emepe.
NDỤMỌDỤ: Nwudo na-achọ na ya si gafee ụlọ, -gị na mmegharị ahụ na-emeghe site angling gị ahu kwupụta ya, na mgbe o ruru n'omume tiis ya. Ọzọkwa, ka onwe gị ahụ ịma jijiji twirl ntutu gị ma ọ bụ ijide ọnụ gị egbugbere ọnụ dị ka nke ga-egosi ya na ị na-ya masịrị.
mfe Nzọụkwụ #6: -Echebara Kwupụta Ya
Gosi na Ị hụrụ ihe ọ na-eme na-enye na-enyere tupu ọ na-ajụ. Site n'idebe ogbugbu obere, gị emesapụ aka ga-enwe ihe karịrị jiri kpọrọ.
NDỤMỌDỤ: Ma ọ bụ n'etiti a na-agwụ ike oru ngo ma ọ bụ na-arịa ọrịa, -egosi ya na ị na-elekọta site n'itinye oge na ya ga-egosi na ị bụ inye nkwado na azụlite.
mfe Nzọụkwụ #7: -Abụ ndị Positive Force ná ndụ ya
-Abụ a mma mmadụ nọ n'iru ya site aiming na-nti n'agbanyeghị ọnọdụ ma ọ bụ mkparịta ụka. Ọ bụ a otutu mfe na-ada na ịhụnanya na onye na-nti vesos onye bụ mgbe niile mkpesa.
NDỤMỌDỤ: Mgbe ụfọdụ negativity na mkpesa bụ dịkwa mma, mbọ ịnọgide na-ndụ nti otú ọ na-echeta oge gị ọnụ dị ka ọkụ na ajị ajị.
Mgbe ọ gaghị ekwe omume “-eme ka” onye ọ bụla na-eche otu ụzọ, -egosi gị positivity na-elekọta ọdịdị ga-agba na chitụ ya otú obi na ziri ezi.
Mgbe bụ "Right Time" Iji na-agbaso A New Mmekọrịta?